Gara aga, Ugbu a, na Ọdịnihu nke Ahịa Online | Martech Zone
Gara aga, Ugbu a, na Ọdịnihu nke Azụmaahịa Onlinentanetị
Friday, February 14, 2014 Satọde, Febụwarị 15, 2014 Douglas Karr
Otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị nke na-arụ ọrụ na mgbasa ozi ọhụụ bụ na ngwaọrụ anyị na ike anyị na-agagharị ngwa ngwa dị ka ihe ọhụrụ nke ngwaike, bandwit na nyiwe. Ọtụtụ ọnwa gara aga, mgbe ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ, ọ bụ ihe ịma aka dị otú ahụ ịlele ma ọ bụ ịkọ ọnụego nzaghachi na mgbasa ozi. Anyị meriri mgbalị niile site na ịtụba ọtụtụ na ya. Nnukwu elu nke olulu ahụ, nke ka mma na ala.
Ahịa ahịa data kụrụ na anyị nwere ike ijikọ omume mpụga, ndị ahịa na omume igwe mmadụ iji mee ka mbọ anyị ka mma. Ọ bụ ezie na ọrụ ahụ bụ eziokwu ziri ezi karị, oge o were iji tụọ nzaghachi ahụ na-agwụ ike. Ule na njikarịcha ga-ebu ụzọ tupu mkpọsa ahụ ma gbyụọ mgbalị ikpeazụ ọbụna n'ihu. Ọzọkwa, anyị dabere na koodu coupon iji soro usoro ntụgharị data n'ụzọ ziri ezi. Ndị ahịa anyị na-ahụkarị mbuli n'ahịa, mana ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-ahụ Koodu ejiri rụọ ọrụ ka a naghị enye otuto mgbe niile ebe ọ ruru.
Usoro ọrụ ire ahịa ugbu a maka ọtụtụ ụlọ ọrụ n'oge a bụ ọtụtụ mgbalị. Ọ na - esiri ndị ahịa ike idozi ngwa ọrụ na mkpọsa, mụta otu esi ejikwa ha, wee tụọ nzaghachi obe. Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa na-amata na ụfọdụ ọwa na-abara ndị ọzọ uru, anyị na-elegharakarị ezigbo njikwa na mmekọrịta nke ọwa. Daalụ ịdị mma nke nyiwe dị ka Google Analytics na-enye ụfọdụ ngosipụta ntụgharị okwu ọtụtụ ọwa, na-ese foto doro anya banyere uru okirikiri, uru obe, yana uru saturation nke ọtụtụ mgbasa ozi.
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na oghere dịka Microsoft, Salesforce, Oracle, SAP, na Adobe na-azụta ihe ike nke ngwa ahịa n'ahịa. Dịka ọmụmaatụ, Salesforce na Pardot bụ njikọta dị egwu. Ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na usoro azụmaahịa azụmaahịa ga-eji data CRM wee mee ka data omume ahụ laghachi na ya maka njigide na nnweta nke ndị ahịa. Dika usoro ahia ndia na ebido imeghari ibe ha na ntanye, o gha enye ha otutu oru nke ndi ahia gha aghazie ighari ka ha weghachite ma ghapu ala na uzo ha choro. Nke ahụ na-atọ ụtọ ịtụgharị uche.
Anyị nwere ọtụtụ ụzọ anyị ga-esi gaa. Fọdụ ụlọ ọrụ dị ịtụnanya na-agbanwe agbanwe na-ebu amụma nchịkọta ụdị nke ga-enye data ziri ezi banyere otu mgbanwe n'otu channel ga-esi metụta mgbanwe niile. Multi-ọwa, ịkọ nchịkọta ga-abụ igodo nke ngwa ọrụ ọ bụla ka ha wee ghọta ihe na otu esi ewepụta ngwa ọrụ ọ bụla n'ime ya.
Ugbu a, anyị ka na-arụ ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agba mgba. Ọ bụ ezie na anyị na-ekerịta ma na-atụle mkpọsa ọkaibe nke ukwuu, ọtụtụ ụlọ ọrụ ka na-ewepụta ogbe ma na-agba mkpọsa kwa izu na-enweghị nkewa, na-enweghị nkewa, na-enweghị ihe na-akpalite, na-enweghị ọtụtụ usoro, usoro mgbasa ozi ọtụtụ ọnụọgụ. N’ezie, imirikiti ụlọ ọrụ enweghị ozi email nke dị mfe ịgụ na ekwentị mkpanaaka.
Ana m ekwu banyere email ebe ọ bụ na ọ bụ usoro nke usoro ịre ahịa n'ịntanetị ọ bụla. Y’oburu na ichoro, ichoro ndi mmadu ka ha denye aha ha ma o buru na ha agaghi agbanwe. Ọ bụrụ n’ị na-eme atụmatụ ọdịnaya, ịchọrọ ndị folks ịdenye aha ka ị nwee ike ịlaghachi ha. Ọ bụrụ n ’ijide njide, ikwesiri ịga n’ihu na-enye ndị ahịa gị ihe bara uru na ịkparịta ụka. Ọ bụrụ na ị nọ na mgbasa ozi mmekọrịta, ịkwesịrị ịnata ọkwa nke itinye aka. Ọ bụrụ na ị na-eji vidiyo, ịkwesịrị ịgwa ndị na-ege gị ntị mgbe ị bipụtara. Ọ na-eju m anya na ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ndị na-enweghị atụmatụ email na-arụ ọrụ.
Ya mere, olee ebe anyị nọ? Teknụzụ dị ngwa ma na-aga ngwa ngwa karịa nkuchi. Ndị ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-elekwasị anya na iju mmiri ahụ kama ịghọta ụzọ dị iche iche iji tinye aka na ndị ahịa n'ezie. Ndị na-ere ahịa na-aga n'ihu na-alụ ọgụ maka pasent nke mmefu ego nke ndị na-ere ahịa na ha nwere ike ha ekwesighi inweta ya n'ihi mmetụta mgbasa ozi nke ikpo okwu ha. Ndị na-ere ahịa na-aga n'ihu na-agbasi mbọ ike na akụ na ụba mmadụ, teknụzụ, na ego ha chọrọ iji nwee ihe ịga nke ọma.
Otú ọ dị, anyị na-enweta ebe ahụ. Na usoro nke ụlọ ọrụ buru ibu na-eguzobe na ndị na-amasị ya ga-enyere anyị aka ịmegharị agịga ahụ n'ụzọ dị irè, nke ọma, na ngwa ngwa.
Tags: adobemicrosoftOraclendị ahịasap
Ngwá Ọrụ Kwesịrị Ekwesị maka Mmetụta ma ọ bụ Mgbasa Ozi
Ijere Ozi bụ Arịrị Ọhụrụ
nwoke nke asaa
Feb 14, 2014 na 10:27 PM
N'uche m, echere m na ụlọ ọrụ achụmnta ego kwesịrị ịgwọ mmekọrịta ọ bụla dị ka ebe ndị na-ege ha ntị na-akpọtụrụ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụghị ọwa niile bụ otu na nke ọ bụla na-enye ụdị ahụmịhe dị iche. Nnukwu ndudue bụ ịdebe ebe niile na-enweghị ozi jikọtara ọnụ ma ọ bụ nke kachasị njọ, na-ebughị uru ga-enye ndị ahịa gị ike.
Feb 15, 2014 n’elekere 10:17 nke abali
@seventhman: ikwusi okwu ike. Syndication n’aghọtaghị etu na ihe kpatara onye ọrụ ji nọrọ na ngwaọrụ ma ọ bụ na ihuenyo ha adịghị oke. Achọpụtara m na Twitter na Facebook. Ọ bụ ezie na anyị na-ebipụta ma na-akwalite na nke ọ bụla, Facebook na-ekwukarị mkparịta ụka mgbe Twitter na-abụkarị nke bọọdụ mkpọsa.
Feb 15, 2014 n’elekere 9:33 nke abali
Akwa post! .. Daalụ maka ịkekọrịta Doug! ..
@ treb072410: disqus nwere nnukwu ekele!
Jun 14, 2017 na 2: 21 PM
Daalụ maka ịkekọrịta… hụrụ nke a bara uru